Chikafu kurwisa kuneta chaunofanira kudya | Bezzia
Ichokwadi kuti dzimwe nguva zvinotiomera kuti tirambe tichifamba, tinoneta zvakanyanya kupfuura zvakafanira uye kana pasina chimwe chikonzero chiri pachena, saka tinofanirwa kutsvaga mhinduro. Ko kana isu tikakuudza iwe kuti kune akateedzana ezvikafu kurwisa kuneta? Ehe, zvekudya iwe zvaunoziva uye izvo zvinofanirwa kunge zviri patafura yako mazuva ese.
Tinoita zvese zvatinogona kuti rarama hupenyu hune hutano, asi dzimwe nguva tinoshaya izvo zvinovaka muviri kana mavitamini izvo zvinoita kuti isu tidzivirirwe zvakanyanya kubva kumarudzi ese ezvirwere zvinogona kumuka. Mune ino kesi, isu tichaona kuti simba rinosvika sei pasina kufunga. Ndezvipi zvezvikafu izvi zvaunodya zuva nezuva?
1 Bhanana ndechimwe chezvikafu kurwisa kuneta
2 Sipinachi nemupiro wayo wedare
4 Chokoreti yakasviba
5 Michero yakaomeswa
Bhanana ndechimwe chezvikafu kurwisa kuneta
Iwe wakazvinzwa zvisingaverengeki uye havana kutsauswa. Nekuti pakati pemuchero, tinoratidzira mabhanana ayo ari mamwe ezvikafu zvekurwisa kuneta kwakanyanya. Izvi zvinodaro nekuti vane mavitamini akasiyana siyana uye zvicherwa, pakati pazvo potassium inogara yakamira. Asi ndezvekuti pamusoro peizvozvo, inotipa fiber uye makabhohaidhiretsi. Izvi zvinoita kuti musanganiswa wezvese izvi uve wakakwana kuti upe muviri wedu simba raunoda. Pamusoro pezvo, zvinozoita kuti tidzokere shure kwekurovedza muviri kwakanyanya uye kuti tinoita zvimwe kana tikazvishandisa zvisati zvaitika.
Sipinachi nemupiro wayo wedare
Kutanga, tinoziva kuti sipinashi ndeye imwe yemanyuko makuru esimbi. Naizvozvo, hatifanire kuvakanganwa mukudya kwedu. Unotoziva kuti unogona kuvatora nenzira dzakasiyana uye izvo zvinoita kuti tirege kufinhwa. Kune rimwe divi, zvakare ine magnesium uye potasium. Nayo, isu tichagara tichichengeta simbi mazinga nenzira yakaenzana, zvinotibatsira kutaura uye kutarisira muviri wedu, pamwe nekuita kuti muviri wedu ushande zvakakwana. Zvinotaridza kuti zvese izvi zvakanakira!
Kana isu hatikwanise kukanganwa nezvake, nekuti isu tinonyatso ziva kuti ndiye chimwe chezvinhu zvakakosha zvezvipo zvake zvikuru. Pakati pavo takasara neizvozvo ine potassium yakatowanda kudarika mabhanana uye zvinovaka muviri zvakasiyana siyana. Saka inoshandurawo kuita sosi huru yesimba. Ichachengeta muviri wako pamwe nekuona kwako uye nezve izvi zvese uye nezvimwe, iwe unofanirwa zvakare kuzvisanganisa mundiro yako, uchigara uchisiya diki diki.
Iri kutaura nezve chokoreti uye ichatinyaradza chete nekuiverenga. Zvakanaka, ndechimwe cheizvo zvekudya kurwisa kuneta kwatinofarira zvakanyanya. Ehezve, iyo yakanyanya kuchena cocoa iyo yainayo, zvirinani. Izvo zvinonzi zvine huwandu hwezvivakwa zvinoshanda nenzira yakafanana kune caffeine, ndiko kuti, nenzira yekusimudzira. Izvi zvinoita kuti tiwedzere kumuka uye tizere nesimba. Izvo hazvidikanwe kushandisa muhuwandu, asi nenzira ine mwero isu tatozadzisa mhedzisiro yatinoda mumuviri wedu.
Chokwadi iwe unoziva zvakare kuti kuve uine shoma nzungu pazuva ndiyo imwe yesarudzo dzakanakisa kune hutano hwako uye chikafu chako. Zvakanaka, ndizvo chaizvo. Nekuti sekuziva kwedu vane mapuroteni asiwo Omega 3 uye inotipa simba. Izvi zvinoita kuti ive imwe yezvikafu kurwisa kuneta. Ehezve, kana iwe uchida kuchengetedza huremu hune hutano, zvakanakisa kusarudza zvakasarudzika uye zvisina-zvakakangwa sarudzo, mukuwedzera kugara uchidzora huwandu.
Ndicho chimwe chezvikafu chatinogona kusanganisa mune chero chikafu, kubva pakudya kwemangwanani kusvika kuzvikafu. Nekuti vanazvo Kugutsa simba rinotizadza nesimba, panguva imwechete iyo ine hutano uye inotizadza isu nezvakawanda zvinovaka muviri. Saka oatmeal ndiyo imwe yesarudzo dzakanakisa dzatinofanira kufunga nezvadzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Nutrition » Zvikafu zvakakosha kurwisa kuneta
4 kukanganisa kwesangano mukicheni